Mampiseho Fizarazaran’ny Mponina sy ny Tsy Fahaizana Manoratra sy Mamaky Teny ny Fanisam-bahoaka ao Bosnia sy Herzegovina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2016 5:36 GMT
Olom-pirenena zokiny milalao echec eny an-dalana ao Banja Luka, Repoblika Srpska, Bosnia sy Herzegovina. Sary: F. Stojanovski, CC-BY.
Nampiseho ny valin'ny fanisam-bahoaka voalohany tao Bosnia sy Herzegovina (BiH) fa nampiditra lalina ny fahasamihafana ara-poko sy ara-pivavahana ny politika nasionalista naharitra ampolony taona, manamafy ny “tombontsoa” amin'ny fanadiovana ara-poko tamin'ny adin'ny taona 1990s izany. Notondroin-dry zareo ihany koa ny filàna tokony isian'ny fanabeazana bebe kokoa, noho ny taha avo amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra – anisan'izany ny tsy fahaizana solosaina – izay miantraika amin'ny fahafahany hifaninana eo amin'ny tontolo ankehitriny.
Nisarika ny saina tamin'ny olan'ny fanisam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fanadihadiana ankapobeny navoaka tao amin'ny bilaoginy ilay mpandala ny vehivavy sady mpikatroka ny zo nomerika Valentina Hvale Pellizzer.
Nanamarika i Pellizzer fa araka ny nampoizina, tsy afa-po ny mpandray anjara rehetra taorian'ny famoahana ny valin'ny fanisam-bahoaka. Mifanohitra amin'ny toro-hevitry ny fiarahamonim-pirenena, natao tao anatin'ny tsy fahampian'ny fiomanana sy ny fanatanterahana ity hetsika ara-antontanisa lehibe ity, ary tsy misy ny fepetra mazava tsara iadiana amin'ny tsirambina amin'ny fitantanana na amin'ny ho an'ny fiarovana ny lahatahiry manokan'ny vahoaka:
Nanao fanentanana tamin'ny alalan'ny fifantohana fanamafisana ny hay isam-ponina mampisara-tsaina amin'ny alalan'ny fanontaniana telo dia ny foko, ny fivavahana ary ny tenin-dreny ireo antoko politika misolotena ireo vondrona ara-poko telo lehibe ao amin'ny firenena”.
Niady ny fiaraha-monina sivily ary resy tamin'ny adiny amin'ny hanaovana ireo fanontaniana ho azo isafidianana [hovaliana na tsia] fa tsy terena (toy ny nanaovana azy) […] ka ny hany safidy ho an'ny olona dia ny fahaizana mamorona amin'ny famaliana na fifantenana ny “tsy te-hanambara/hametraka ny foko, fivavahana na tenin-dreny fampiasako. Roapolo taona taorian'ny ady, ny laharam-pahamehan'ny antoko dia ny hahazo fandresena, na hitondra ny kabary milaza tena ho lasibatra ao amin'ny dingana vaovao
Nandritra ny taona maro, noho ny tsy fifanarahana amin'ny fomba hanangonana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo sampan-draharaha telo misahana ny antontan'isa ao BiH (sampan-draharaha-panjakana sy sampan-draharaha avy amin'ny fikambanana ara-politika roa, Republika Srpska sy ny Federasiona), ny hany lahatahirin'ny fanisam-bahoaka azon'ny vahoaka jerena dia ny fitambaran'ny isan'ny olona monina ao amin'ny firenena sy ireo tena tanàndehibe. Mazava ho azy fa mahatonga ny sahoan-dresaka eo amin'ny firenena Balkan maro foko izany. Makedonia, ohatra tsy nisy fanisam-bahoaka nanomboka tamin'ny 2002, na dia tokony hatao isaky ny folo taona aza ity bemidina ara-antontan'isa fototra ity araka ny lalàna.
Noho ny faneren'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, navoakan'ny Sampan-draharaha BiH misahana ny Antontan'isa tamin'ny 30 Jiona 2016, iray andro mialoha ny tena fe-potoana farany tokony hivoahany ny vokatra. Nanangana tranonkala an-tahiry misokatra popis2013.ba ihany koa ny sampan-draharahafa mbola tsy ahitana ny singa rehetra hita maso nampanantenaina sy ifarimbonana ilay habaka — telo volana mahery taty aoriana –fa hafatra tsy mandrisika “Tsy ho ela” ( “Uskoro”) no miseho. Na izany aza, manome fahafahana hitroka lahatahirin'ny isan'ny mponina amin'ny endrika PDF sy Excel izay nifotoran'ny asan'i Pellizzer hanaovany ny famakafakana izany.
Araka ny voalazan'ny vokatra, manasokajy ny tenan'izy ireo ho mpikambana ao amin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina ara-poko telo lehibe indrindra, Bosniaka, Serba ary Croaty ny ankamaroan'ny olom-pirenena BiH. Mampiasa ny fiteny ara-poko mifanaraka amin'izany ireo ary nanambara tao amin'ny fanadihadiana fa mpivavaka, mpikambana ao amin'ny finoana Islamo, Ortodoksa ary Kristianina Katolika araka izany filaharana izany izy ireo.
Mponina isaky ny fikambanana ara-poko/firenena, taha BIH (firenena manontolo), FBIH (Federasionan'i Bosnia sy Herzegovina), RS (Repoblika Srpska), BD (Distrikan'i Brčko). Sary: Fanisam-bahoaka, Tokan-trano sy Toeram-ponenana ao Bosnia sy Herzegovina, vokatra farany tamin'ny 2013, Sampan-draharahan'ny Antontanisa Bosnia sy Herzegovina.
Ny safidy amin'ny fanononana ny Bosniana ( “Bosanski”), fa tsy endrika ara-poko kokoa Bosniaka ( “bošnjački”) amin'ny fitenin ‘ny Bosniaka, vondrona ara-poko lehibe indrindra, no anton'ny krizin'ny andrim-panjakana hafa eo amin'ny foko lehibe Bosniak sy ireo antoko Serba.
Nampiseho ihany koa ny vokatra navoaka fa amin'ireo mponina 3,5 tapitrisa, maherin'ny 96000 no ao amin'ny “hafa” – vondro-piarahamonina ara-poko tsy ao anatin'ireo “telo lehibe” – raha 27.000 kosa ireo tsy nety nanambara ny fikambanany ara-poko, 6.000 kosa namaly ny ” tsy fantatra “. Tsy nisy ny antsipirihany navoaka tamin'ny isa ahitana ny “hafa”, anisan'izany ny Roma.
Nanao fandinihana ny Pellizzer fa raha mponina 130.054 no mihevitra ny tenan'izy ireo fa tsy mpikambana ao amin'ireo vondrona ara-poko telo lehibe indrindra ka monina ao amin'ny tanàna iray daholo, dia io tanàna io no fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny firenena, aorian'i Sarajevo sy Banja Luka:
Ao amin'io tanàna kely io ihany koa no monina ny ankamaroan'ny olona 118.612 tsy miraharaha/tsy mino an'Andriamanitra/tsy manambara/hafa na tsy fantatra ka 63.066 monja no mampiasa fiteny hafa tsy mitovy amin'ny tenin-dreny hafa ankoatra ireo vondrona ara-poko telo lehibe, fiteny izay faritan'ny vokatra ankehitriny ho hafa / tsy fantatra. Ary mamehy ny haben'ny fahabetsahan'ny kolontsaina sy ny fahabetsahan'ny foko manontolo ao Bosnia Herzegovina taorian'ny ady io “tanàna” io.
Tsikaritra koa fa ankoatra ireo tanàna lehibe tahaka an'i Sarajevo sy Tuzla, dia monina ao amin'ny vondrom-paritany efa nanava-tena ny ankamaroan'ny olom-pirenena BiH, ary tsy misy fifandraisana betsaka miampita ny tsipika [fefy] ara-poko.
Tsy nahavita nanome vokatra manan-danja mikasika ny olona manana filàna manokana ny fanisam-bahoaka, satria napetraka tamim-pahadisoana ny fanontaniana. “Mijanona voahilikiliky ny fanisam-bahoaka natao ho fanampy itondrana ny mangaraharaha sy vaovao azo antoka nahafahana nandaminana tsara kokoa ny otrikarena ny fahasembanana ,” hoy i Pellizzer nanoratra. Nampian'ity mpisera Twitter ity hoe:
#BiH ima najviše NEPISMENIH i najmanje visokoobrazovanih u regiji #popisBiH
I BiH no manana isa ambony indrindra amin'ny olom-pirenena TSY MAHAY MANORATRA SY MAMAKY TENY sy isa ambany indrindra amin'ny olom-pirenena nahita fianarana ambony ao amin'ny faritra. Ankehitriny, izany no tena vaovao misy momba ny fanisam-bahoaka, ady seza politika ny ankoatra izany!
Nampiseho ihany koa ny fanisam-bahoaka fa tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 3% ny mponina – izay vehivavy sy tovovavy no ankamaroany. Mampiseho ny lahatahiry azo nojerena momba ny fanabeazana fa olom-pirenena iray tapitrisa mahery no nandia fianarana ambaratonga voalohany na tsy nianatra mihitsy. Ny tahiry momba ny fahaizana solosaina kosa dia mampiseho fa olona 1,1 tapitrisa no tsy mahay solosaina, tsy mahay manao lahatsoratra, tsy mahay manao tabilao, na tsy mahay mampiasa mailaka sy aterineto.
Tsy fahaizana solosaina ao Bosnia sy Herzegovina. Sary: Fanisam-bahoaka, Tokantrano sy Trano fonenana ao Bosnia sy Herzegovina, vokatra farany tamin'ny 2013, Sampan-draharahan'ny Antontanisa ao Bosnia sy Herzegovina.
Tamin'ny famintinana ny fanadihadiany, nanatsoaka hevitra i Pellizzer fa efa ho ny antsasaky ny mponina ao Bosnia sy Herzegovina no tsy ampy fitaovana handraisany anjara na hahazoany maka tombontsoa amin'ny vanim-potoanan'ny vaovao [torohay] ankehitriny; nisy ihany koa ny elanelana mampiahiahy eo amin'ny lahy sy vavy:
Raha manana ny antsasa-manila ny mponina […] izay zara raha afaka mampiasa solosaina sy mamakivaky ny tontolo nomerika ankehitriny isika, ahoana no ahafahantsika miresaka asa sy ny fahaizan'ny mpiasa? Inona no hoavy atolotsika raha mizaka ny hantsana roa sosona eo amin'ny fanabeazana ny vehivavy sy ny tovovavy: eo amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra sy eo amin'ny fahafehezana nomerika? […]
Firenen'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra i Bosnia Herzegovina, ahitana olon-dehibe sy mponina miha antitra. 39,5 no taona salanisan-taona ankapobeny. Sarotra ho an'ny olon-dehibe ny manova ny fitondran-tenan'izy ireo manokana, ka ahoana no fomba ahafahan'izy ireo miala amin'ny fironana ratsy amin'ny politika, ny toe-karena sy ny fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny firenen'izy ireo? Tsy vitan'ny mampatahotra fotsiny ity fanisam-bahoaka tara, tsy lavorary, tsy feno sy notoherina ity fa mihoatra noho izay.
Ny fanabeazana no tokony ho olana lehibe, maika sy stratejika indrindra ho an'ireo mpanao politika marobe vonona hatrany, isaky ny fihodinana ara-pifidianana, ara-panjakana na ara-politika, amin'ny fandaniana teny an-tapitrisany hanentanana momba ny fomba hanorenana na hanorenan'izy ireo indray ny fireneny, ny andry tsirairay [fanjakana na tsia], ny fari-pitantanana na kaominina.
Amin'ny volana Desambra 2016, heverina fa hanome “fankatoavana” ny valin'ny fanisam-bahoaka ny Hetsika Fanaraha-maso iraisam-pirenena.